Famatsiam-bary : 35.000t isam-bolana hiatrehana ny maitso ahitra -
AccueilRaharaham-pirenenaFamatsiam-bary : 35.000t isam-bolana hiatrehana ny maitso ahitra
Tsy misy ahiana. Marina fa efa ao anatin’ny fotoan’ny maitso ahitra mihitsy ny eto Madagasikara amin’izao fotoana izao eo amin’ny resaka vary. Efa misy anefa ny fepetra noraisin’ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Varotra sy ny Fanjifana manoloana ny fiatrehana izany fotoanan’ny maitso ahitra izany.
Araka izany, nitondra fanazavana ny teo anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny Fanjifana fa tsy misy atahorana ny famatsiam-bary eto Madagasikara. Voalazan’izy ireo mantsy fa 30 000t hatramin’ny 35 000 t isam-bolana ny vary miditra eto amintsika hiatrehana izany vanim-potoan’ny maitso ahitra sy ny fahavaratra izany.
Nohamafisin’ny minisitera fa manomboka izao, dia tsy misy na koa tsy mandoa fadin-tseranana intsony ny vary avy any ivelany. Noraisina izany fepetra izany, raha ny fanazavana hatrany, mba hisian’ny fampiharana ny vidim-bary tena izy, ary mba ho tsapan’ny mpanjifa avy hatrany ny fiovan’ny vidim-bary.
Ankoatra izay, midina ifotony, mitety faritra maro ny eo anivon’ny minisitera mpiahy amin’izao fotoana izao mijery sy mamantatra ny tena filàn’ny mponina amin’ireo faritra maro eto Madagasikara. Marihina mantsy, araka ny fanazavana ihany, fa nitombo ny filàna eto Madagasikara eo amin’ny tontolon’ny vary. Noho izany, tsy maintsy miakatra manaraka io filàna io ihany koa ny famatsiana.
Etsy andaniny, efa nifampiresaka sy nifandinika, ary nifandresy lahatra tamin’ireo mpandraharaha mpanafatra vary miara-miasa aminy ihany koa ny minisitera mahakasika ny vidin’ireo vary miditra eto Madagasikara ireo. Noho izany, voalaza fa handray fepetra hentitra amin’ny fanararaotana eo amin’ny vidim-bary ny eo anivon’ny minisitera.
Na izany aza anefa, hita ho mbola midangana ny vidim-bary eto amintsika, eny fa na tsy tokony hitovy aza ny vidin’ny vary eto an-toerana (zana-tany) sy ny vary nafarana. Hatreto, tsapa fa mbola tsy voafehin’ny minisiteran’ny Varotra sy ny Fanjifana ny vidim-bary, eny fa na milaza aza izy ireo fa tsy miditra amin’ny vidin’ny vary zana-tany aza ny Fanjakana.
Vato dimy amin’ireo mpifidy enina no nandany ny tompon’ity haino aman-jery tsy miankina iray ity ho filohan’ny kaomisionin’ny famoahana ny karatra maha mpanao gazety, nandritra ny fivoriana faharoa izay notanterahin’izy ireo omaly. Lany ho mpitondra ...Tohiny